40 နှစ်ကြာမိန်းမတို့အဘို့ contraceptives
40 နှစ်ကြာဓတေား၏ပြဿနာဒီတော့အမျိုးသမီးတစ်ဦးနေဆဲကိုယ်ဝန်ရနိုင်, သွေးဆုံးကြားဖြတ်နှင့်အတူဆိုသော်ငြား, တဖြည်းဖြည်းရာသီတခါမဟုတ်ဖြစ်ပေါ်ပေမယ့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အငယ်လူနာအဖြစ်စူးရှ, ဒါပေမဲ့သွားပါ။ အံ့သြဖွယ်အမျိုးမျိုး၏ 40 နှစ်ကြာမိန်းမတို့အဘို့ contraceptives လည်းလူလတ်ပိုင်းအမျိုးသမီးပိုပြီး nulliparous အမျိုးသမီးတွေကို contraindicated သူမြားကိုသုံးနိုင်သည်။
40 နှစ်ကြာခံတွင်း contraceptives
သူတို့က 21 ရက်ကြာသောက်ရနျလိုအပျသောအရာ, တက်ဘလက်ကကိုယ်စားပြု, ပြီးတော့7ရက်များအတွက်ချိုးလုပ်နေကြသည်။ သူတို့ကကိုယ်ဝန်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းကင်ဆာနှင့်သားဥအိမ်၏ရောဂါများအန္တရာယ်လျှော့ချ, နှင့်ရာသီစက်ဝန်းပုံမှန်, PMS များအတွက်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့်နာကျင်မှုလျှော့ချမသာ။ 40 နှစ်ကြာမိန်းမတို့အဘို့ခေတ်သစ် contraceptives progestin တားဆေးဆေးလုံးနှင့် Mini-ဆေးလုံးကိုပေးအပ်သည်။
ထိုသူအပေါင်းတို့ကဟော်မုန်း၏သေးငယ်တဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုမဆံ့ အီစထိုဂျင် ။ စုစုပေါင်းပါးစပ် contraceptives များအတွက်ပါဝင်သည်:
သို့သော်နှစ်ပေါင်း 40 ကျော်အဟောင်းအမြိုးသမီးမြားအတှကျဟော်မုန်း contraceptives သည့်လက္ခဏာများနှင့် contraindications ၏အခြေခံပေါ်မှာဆရာဝန်တစ်ဦးခန့်အပ်, တည်ဆဲရောဂါများ, etc စခွေငျးငှါ ကနေကြုံတွေ့နေကြရသည်, အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သောက်ပါလျှင် အဝလွန်ခြင်း , နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ, သူမကဓတေား၏အခြားနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဟော်မုန်းအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုပြီးနောက်သိမ်းယူနိုင်ကြောင်း contraceptives ဥပမာ, ပျက်ကျ, ဒါပေမယ့်ပုံမှန်ရှိပါတယ်သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်မဟုတ်။
40 ကျော်အမျိုးသမီးများ contraceptives
ရှည်လျားသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီနိုင်ပါတယ်ဒီအသက်အရွယ်မှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးကသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်နှင့်မလိုချင်သောကိုယ်ဝန်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖြစ်စံကွန်ဒုံးကိုသုံးပါနှင့်နေဆဲလည်းအသုံးပြုရလွယ်ကူနေသောသက်သက်သာအမျိုးသမီးကွန်ဒုံး, ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လိင်အင်္ဂါမှာသူတို့ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ပိုများသောမကြာသေးမီကအမျိုးမျိုးသောဖယောင်းတိုင်, အမြှုပ်, gels နှင့်ဂျယ်လီများပါဝင်သည်အရာ spermicidal အေးဂျင့်, ပျော်ဝင် Tablet နှင့်ရုပ်ရှင်, ရေမြှုပ်သုံးစွဲဖို့အလွန်လူကြိုက်များလာပါတယ်။
သူတို့ထဲကတချို့ကတိုးမြှင့်လုံခြုံရေးများအတွက်မြှေးသို့မဟုတ်သားအိမ်ခေါင်းဦးထုပ်နှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုရန်အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးစွန်သောအဆိုပါ Intrauterine device ကိုကဲ့သို့, အတားအဆီးဓတေားရည်ညွှန်းကြသည်။ သူတို့ကအားဖြင့်မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်၏ဖြစ်ပျက်မှုတားဆီး, အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့သားဥအိမ်ဝင်ထံမှသုက်ပိုးတားဆီး။ ပလတ်စတစ်များထုတ်လုပ်ခြင်း၏ပစ္စည်းကိုအထူးသဖြင့်, ထိုမြှေးသို့မဟုတ်ဦးထုပ်မကြာမီလိင်ဆက်ဆံရှေ့တော်၌ထိုလိင်အင်္ဂါသို့ထည့်သွင်းသည်နှင့်လိမ်လအနည်းငယ်ပေါ်တွင်တင်။ , ဆီလီကွန်, ရာဘာစေးများနှင့်အခြားသူများကိုပြုမူခြင်းသို့မဟုတ်တောင်မှနှစ်ပေါင်းနိုင်ပါတယ်။ ၏သင်တန်း, ဤ contraceptives တစ်ခုချင်းစီအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုနှစ်ဦးစလုံးရှိသည်, 40 နှစ်ကြာအမျိုးသမီးတစ်ဦးသာစေ့စေ့စပ်စပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်ရွေးချယ်မှုလုပ်သင့်တယ်, သူတို့ရဲ့လိင်အသက်တာ၏အင်္ဂါရပ်များအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
အများကြီးအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်လည်းမရှိရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်သည်လျှင်မရသောကွောငျ့, ထို့နောက်တက်ဘလက်ရုံသဘောမျိုးလုပ်မထားဘူးသောရေကိုသောက်မှန်မှန် IUD ထားသို့မဟုတ်။ ဤကိစ္စတွင်၌ထိုကဲ့သို့သောထုပ်သို့မဟုတ်မည်သည့် spermicide အဖြစ်အတားအဆီးကာကွယ်မှုနည်းလမ်းသုံးစွဲဖို့ သာ. ကောင်း၏။ အဆုံးစွန်သောအချို့သည်လည်းမကြာခဏပင်ရသောအခါစိတ်လှုပ်ရှားခြောက်သွေ့တဲ့တွေ့ကြုံခံစား, လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသမီးအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောအရာကသဘာဝချောဆီအရည်ကြည်, တိုးတက်စေရန်, ဥပမာတစ်ခုအပိုဆောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ယခုပင်လျှင်ကလေးများရှိခြင်းကိုသင်ပိုးသတ်များ၏ option ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပြီး, အဲဒါကိုအနှစ်လေးဆယ်ပြည်ပမှာလှည့်တဲ့သူမိန်းမတို့အဘို့အကြံပြုကြောင်းအနည်းငယ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
က Man - ကညာ
မိန်းမတို့အဘို့ Viagra - Viagra ယောက်ျားကနေမတူအမျိုးသမီး?
ပျက်ကျ - ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ
အာလူးပြုတ် - ကယ်လိုရီ
Antral follicles - ကဘာလဲ?
ပြတိုက် Granja Colonia
Kim Kardashian ကပေါ်ပေါ်ထင်ထင် Kris Humphry နှင့်အတူလက်ထပ်ထိမ်းမြားအကြောင်းကိုပြောဆိုသော
ဆိုဖီ Turner စီးရီး "Thrones ၏ဂိမ်း" ၏မှားဘက်အကွောငျးပွော
အိုင်ကွန် "မကြူးကျြောမြို့ရိုးအ" - ကူညီပေးသည်သောအရာကိုအဓိပ္ပာယ်?
ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်မင်းသားကမ္ဘာကြီးကို proletariat ၏ခေါင်းဆောင်ကစားရန်လိုလား!
နို့နှင့်အတူ Polenta - သည်နှင့်အတူကျန်းမာအာဟာရအစားအစာများအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများ
ငါအလေးချိန်မဆုံးရှုံးနိုင် - ဘာလုပ်သနည်း